I-Osteochondrosis yentamo, ukuthintela, unyango kunye namanyathelo omntu kunye neendlela
Yintoni ephazamisa izicwangciso zethu? Isifo esingathandekiyo, intlungu esisihluthulisa ixesha elide kunye nokuqhubekayo. Namhlanje siza kuthetha nge-osteochondrosis. Ngoko, umxholo wendaba yethu yanamhlanje ngu "Osteochondrosis entanyeni, ukuthintela, unyango kunye neendlela zokwenza abantu."
Utshintsho olwenzeka ngenxa yokungondleki kwamathambo kunye ne-cartilage yomgudu kuthiwa yi-osteochondrosis. Unyaka emva konyaka, i-osteochondrosis igxininisa isibini emva komkhuhlane, esi sifo sifanele igama elithi "isifo senkulungwane". Kwaye, ngokubanzi, abantu abagulayo abaneminyaka yobudala. Ngokuqhelekileyo, utshintsho olunxulumene ne-osteochondrosis luqhelekile kubantu abaneminyaka engama-30 ukuya kuma-50 ubudala. Engaqhelekanga kubantu abaneminyaka engama-50. Iimbangela ze-osteochondrosis zibuhlungu ngokomzimba, i-hypothermia entanyeni kunye nebhinqa lehlombe. Ukuxhatshazwa kwemisipha eqhubekayo emlonyeni wesibeletho, ngamanye amagama: ukunyanzeliswa kwezinto ezizenzekelayo, kunye nokusebenza kwemoto, ukuba ukunyakaza kungakhulelwe, kungabonakali, konke oku kudala nemeko yokubonakala kunye nokuqhubela phambili kwe-osteochondrosis.
Isizathu esona siqhelekileyo se-osteochondrosis yindlela yokuphila, kunye nokutya okungafanelekanga. I-Osteochondrosis yomgudu womlomo wesibeleko yinkqubo ye-pathological lapho i-disk ye-vertebral isondlo esondlekile, ekhokelela ekulimaleni kwayo. Ngenkqubela phambili yesi sifo, ii-discs intervertebral zilahlekelwa ngumumo wazo kwaye ziyeke ukwenza imisebenzi yazo eyintloko. Ikhono lomgudu ukulwa nokuxinzezeleka komzimba lilahlekile. Inxalenye yangaphakathi yediski (i-pulp) igxininisa kwaye idibanise zibe ziziqithi ezikwazi ukugqithisa umgca wegigaments ejikeleze i-pulp, kwaye idibanise iingcambu zentsholongwane ye-vertebral, eyenza ukubunjwa kwe-hernia-intervertebral hernia - enye yeendlela zokugqibela ze-osteochondrosis.
I-Osteochondrosis yommandla wesibeleko inokukhupha intloko, intlungu entanyeni kwaye idlula ingalo. Ku nokuba novakalelo "bokukhahlela" ezandleni nasentanyeni. I-Osteochondrosis inokubangela ukuba kuvuke ubusuku ngenxa yokubonakala kwentlungu kunye nokunyaniseka kwindawo yesigxina esiphezulu, njengalowo uphuphayo sifika ixesha elide kwisithuba esingenasiphako. Olunye ubonakaliso lwe-osteochondrosis yomlomo luphulo lwezengqondo zesondlo kunye nokubonakala kweempawu ezihambelanayo: ukubuthathaka ngokukhawuleza, ukulahleka kwengqondo, ingxolo entloko, ukungasebenzi kakuhle. Ngako oko, phambi kobuchopho, kuyimfuneko ukuba uqaphele ngokukhethekileyo: ukuphepha ukujika okubukhali kunye nokuqinileyo kwentloko, ukuhlala kwindawo enye ixesha elide, ukuphakamisa nokuhambisa izinto ezinzima. Kubalulekile ukuba ufunde indlela yokuhamba kakuhle, ngokukhethekileyo ukulala kunye nokunyuka ebhedeni. Xa uya kulala, hlala emphethweni webhedi, ukuba umgudu uvumelekile, gcina intloko yakho kwaye ubuyele ngqo. Musa ukulala ngokukhawuleza, kungcono ukuhlala kwisithuba esinikeziwe imizuzwana embalwa, uze ulale kwicala lakho ngokukhawuleza kwaye ulale kwaye ulale ixesha elide. Emva koko thabatha indawo ekhululekile, phulaphula umzimba wakho kwaye uzame ukwenza into enokuthi ungayithandi. Xa ulala emhlane wakho, zama ukungaqabuki umva wakho entendeni. Ukuba kuyimfuneko, umzekelo, jikela kwicala layo, kungcono "ukucokisa ngokucophelela" ukusuka kwintloko yentloko.
Xa unyanga i-osteochondrosis yommandla wesibeleko, amayeza esintu aqhelekileyo asetyenziswa. Enye yeendlela zokupheka: uthele amaqabunga amanzi ngokubilisa ngamanzi abilayo, uze ukhuphe ngaphandle kwaye upholile. Izitya zisetyenziselwa emva kwentamo, phezulu kwefilimu kunye ne-insulated well. Gcina malunga neyure. Le nkcenkceshe iyanciphisa intlungu kwaye iyanciphisa imida yegazi yengqondo.
Ungasebenzisa le recipe: xuba i-wholemeal ngamanzi, yenza ikhekhe. Fry ikhekhe kwi-skillet ngaphandle kweoli. Kulungile, sebenzisa emva kwentamo uze ubambe de ide ipholile.
I-Osteochondrosis iphinda isebenzise i-infusions kunye ne-decoctions yeentyantyambo ze-tansy, iintyatyambo ze-lilac, i-radishes, i-oats, i-cherry white, i-wort yaseYt. John, i-juniper, i-barberry, i-sage. Unokwenza ukumnika okanye ukuhlutha i-decoction ekuqokeleleni kwezi zityalo. Zisetyenziselwa njenge-diuretics, i-analgesics, ukuphucula imetabolism.
Kodwa kubaluleke kakhulu ukukhusela eso sifo kunokunyanga. Ukuthintelwa kwe-osteochondrosis, oku kulandelayo kufuneka kwenziwe:
1. Umlenze uqonde. Amagxa awapheliyo ngexesha lokusetyenziswa. Ukunyuka kwentloko ukuya ngasekunene (ungaphenduki!) Namaqhinga uzama ukuthinta ihlombe ngendlebe yakho. Buyela kwisikhundla sokuqala uze wenze umthamo kwiphepha lasekhohlo. Ukuzivocavoca kungenakusebenza ngokukhawuleza. Kodwa ngexesha uya kukhulula.
2. Umzimba uqonde. Indlebe ilula ehlombe lasekunene, inqanaba ibonisa, ngoko intloko ihamba ngokukhawuleza kwiphepha lasekhohlo nasemva. Gwema ukujikeleza kweetyhula yentloko. Yenza amabini amabini kwindlela enye kunye neyesibini kwenye. Ukuqhekeka kwezi zihlandlo akuvunyelwanga.
Ukuze ugweme i-osteochondrosis, kufuneka ulandele le mithetho elandelayo: yenza okungakumbi unyango, jonga ukuhamba kwakho. Ukuphelisa umthwalo onzima emsebenzini, ekhaya. Kwaye into ephambili: ngokukhawuleza ukulahla okokuqala ukungathandeki kwintsimi yomlomo wesibeletho.
Siyathemba ukuba inqaku lethu likuthandayo malunga ne-osteochondrosis yentamo, ukuthintela, unyango kunye nezilwanyana zamanqanaba kunye neendlela eziza kukunceda ulahlekise esi sifo.
Indlela yokukhawuleza ukukrazula imivimbo kunye nokunyusa
Kutheni emva kwe-stomachache?
Ubuhlungu kwicala lasekunene kumanci
Indlela yokunciphisa ubuhlungu besisu emilenzeni?
Indlela yokukhetha icebo lombala kwindlu
Indlela yokunyamekela ukunweba kweenwele
Ungayinqoba njani uthando kumntu othandekayo?
I-recipe ye-pasta ngamakhowe
Isobho sesonka kunye ne-buckwheat
I-Apple pie nge-ukhilimu omuncu
Ukutya okunomsoco kuyadingeka kwisidlo somntu somhla
Iingcebiso Zokunakekelwa Ngamanye
Ihamburger eyenziwe nge-rye isinkwa
Umlenze wenkukhu kwisikhwama